Ulamaa’onni godina Baalee aanaa 20 irraa walitti dhufuun murtii ulamaa’onni Harargee Bahaa dabarsan deeggaran. - NuuralHudaa
Ulamaa’onni godina Baalee aanaa 20 irraa walitti dhufuun murtii ulamaa’onni Harargee Bahaa dabarsan deeggaran.
On Jul 3, 2018 93
Ulamaa’onni aanaawwan Baalee irraa walitti dhufan kunniin Masjida seena-qabeessa (Masjida-Nuur) kan magaalaa Roobee keessatti argamuti wal gahuudhaan; jijjiirama amma biyya keessatti mul’aterratti hundaahuun ibsa ijjannoo qabxii 7 qabu baasanii jiru.
Ibsi Ulamaa’onni Godina Baalee baasan akka asii gadii kana.
Jijjiirama Muummichi ministeeraa Dr Abiy Ahmad fide kana waan qabnu hundaan ni deeggarra.
Yaalii ajjeechaa guyyaa Sanbataa Dr. Abiy Ahmad irratti taasifame baayyee itti gaddinee jirra, Ammas ni balaaleffanna.
Majliisa (Durriyyee) kan ummata Islaamaa irratti fe’ame duraanis nuti hin filanne, Ammas nurraa bakka hin bu’u, ni balaalleffanna.
Hanga majliisni seeraan alaa kan qabeenya uummataa nyaatu kun nurraa bu’utti hajjii bara kanaa irraa eegallee hin hajjinu.
Weerarri liyyuu Poolisiin naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa irraan aanaalee garagaraa keesaatti raawwattu hatattamatti akka dhaabbatuufii; qaamni waan kana raawwate seeratti akka nuuf dhiyaatu asumaan muummee ministeera biyyattii Dr Abiy Ahmadiif dhaamsa dabarsina.
Deeggarsi ummata daangaa irraa buqqa’eef godhamu hanga rakkoon isaanii guututti furamuuf gadi fageenyaan akka itti fufu dhaamsa dhaammanna.
Namoota amantaa dahoo godhachuun shira diinaatiif riqicha tahanis ni balaaleffanna. Namoonni akkanaa nurraa bakka hin bu’an.
Ulamaa’ota guyyaa har’aa wal gahii kanarrati hirmaatan keessaa:
Sheikh Abdurrahmaan Aadam
Sheikh M/Kaamil Abdallaah
Sheikh M/Amiin Aadam
Sheikh Waliyyii H/Alii Waadoo
Sheikh M/Qaadii Sh Ahmad
Sheikh Awwal Sadee
Sheikh M/Khadar Daawud
Sheikh M/Aliyyii Owsii
Sheikh Abdullaah Ibraahiim
Sheikh Yaassiin Abdul Baasix
Sheikh AbdulJabbaar Umar
Sheikh Aadam Amaan
Sheikh Abdu-Raafi’ Aliyyii
Sheikh Jamaal Kubbaayyoo
Sheikh Haashim Amaan
Sheikh Muhammad Muusaa
Sheikh Jamaal Huseen
Sheikh Huseen Zakariyyaa
Sheikh Idiriis Khadiir
Sheikh Abdussamad Sh Abdul Qaadir
Sheikh Sa’ad Ismaa’il
Sheikh Jeylaan Khadiir fii kanneen birootis irratti argamaniiru.
May 22, 2022 sa;aa 2:58 pm Update tahe